Tontolon’ny Arabo: Fety nahaterahana fampieritreretana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2009 19:18 GMT
Maro ny mpitoraka bolongana maneran’ny tontolo ny Arabo no maneho aterineto ny fety nahaterahana amin’ny alalan’ny lahatsoratra filozofika, izay mitantara ny fiainana, ny fanantenana, ny zava-bita ary ny nofinofin’izy ireo.
Mibanjina ny hevitra entin’ny fiainana ny Syriana Abu Fares eto am-pankalazana ny fety nahaterahany. Manoratra izy:
Fety nahaterahako izao. Tsy afaka miteny aho hoe mbola eny antsasa-dalana ny tenako.
Raha eritreretina daholo ny fomba niainako hatramin’izay, ny fomba fiainako ankehitriny sy ny hoe amin’ny fomba ahoana no andrafetako ny fiainako sisa tavela, dia tsy azoko antoka fa ho tratrako ny faha-98 taonako. Raha mitady nenina eo anelanelan’ny fe-potoana ianao dia tsy hahita izany mihitsy akory. Tsy ho hitanao fahatsapana ny fahasambarana tanteraka. Efa betsaka ny vintana no nanjavona teo anatrehako ary vitsy ireo azoko kisendrasendra nefa tsy azo antoka. Imbetsaka aho no efa lavo ary efa nitraka. Efa nitia aho nefa resy, fa mbola raiki-pitia indray taty aoriana, ary ho mandrakizay.
Niresaka ny zava-niseho taminy nandritra ny taona lasa ny Jordaniana Ali Dahmash, vao nisantatra ny faha 36 taonany izy, ary manampy ny resany manao hoe:
Ny teny ifaharana ao anatin’ny raharahan’ny taona lasa sy ny zavatra mbola ho avy dia ny teny hoe Fiovana. Tsara ny fiovaovana. Ary amin’izao fotoana izao dia miaina ao anatin’izany isika, mitohy foana ny fiovaovana. Tsy mitsahatra miova ny zava-drehetra manodidina ahy. Ny toe-karena, ny olona, ny teknolojia sy ny fomba ifandraisantsika. Miova hatramin’ny lokon’ny voloko, ny fijery ananan’ny masoko, kanefa moa izany dia tafiditra ao anatin’ny fihodikodin’ny fiainana. Manana ny fanantenana aho fa ny taona ho avy dia hitondra fiovana tsara amin’ny fotoana tena ilaiko azy indrindra, satria ity no andro ao anatin’ny taona izay ankalazako ny faha 36 taonako eto ambonin’ny tany.
Mandritra izany ao Bahrain, hankalaza ny fety nahaterahany miaraka amin’ireo namany mapetraka akaikin’I Kuwait i Maha Al Yousif . Manoratra izy:
Arahaba tratry ny fety nahaterahanao ME 😉
Hankalaza ity herinandro ity ao Kuwait miaraka amin’ny namako 2 tena akaiky ahy indrindra aho.
Manao fanamarihana ny Jordanianina 7aki Fadiizay mipetraka ao Canada izay mitantara fa hoe adinony ny nanamarika ny fety nahatehany tao anatin’ny bolongany ary manampy ny resany izy manao hoe:
33 taona aho. ODRAY!fa maninona re olona no dia manidina toy izao ny taona a??? Tena marina e, ohatry ny tsy azoko veroka mihintsy hoe ahoana moa no nahatonga ahy ho 33 taona. Izaho aloha dia tena tsy tia ny isa tapisaka mihintsy e (nombre impaire), hitako be hoe mampiorona ny hodi-doha izany ilay izy, sa ahoana hoy ianao?